Qaramada Midoobay oo digniin kasoo saartay qatarta burcad badeeda Soomaaliya. | puntlandi.com
Qaramada Midoobay oo digniin kasoo saartay qatarta burcad badeeda Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday bulshada caalamka iyo shirkadaha maraakiinta inay dardar geliyaan ilaalada xeebaha Soomaaliya, si loo ciribtiro burcad badeeda soo laabatay kadib muddo shan sano oo hakad ay ku jireen.
Yury Fedotov, oo ah agaasimaha xafiiska Qaramada Midoobay ee dambiyada iyo mukhaadaaradka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in biyaha Soomaaliya ay noqon karaan marsada burcad-badeednimada iyo dembiyada kale ee caalamiga ah haddii aan feejignaan la muujin.
“Waa muhiim in beesha caalamka ay feejignaadaan iyo in maraakiibta ganacsigu raacaan talooyinka la taliyayaasha maraakiibta iyo badaha caalamiga ah, marka ay qorshaynayaan inay si nabad gelyo ah ku maraan biyaha Soomaaliya,” ayuu yiri Yury Fedotov,
Sarkaalkaan katirsan Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegay weerarada Burcad badeeda inay daciifinayaan dadaalada lagu doonayo in lagu xasiliyo Soomaaliya.